Muqdisho: Gabar dayar oo lasheegay in lakufsaday kadibna dabaq laga soo tuuray - Tilmaan Media
Muqdisho: Gabar dayar oo lasheegay in lakufsaday kadibna dabaq laga soo tuuray
Xamdi Maxamed Faarax oo ahayd gabar 20 jir ah ayaa waxaa laga soo tuuray dabaq kuyaalla degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Qaar kamid ah ehelada marxuumada ayaa sheegay in hay’dda dambi baaristu u xaqiijisay in gabadha lakufsaday kahor intaan dabaqa laga soo tuurin.
Xamdi oo qoyskeedu dagan yihiin gobolka Galgaduud ayaa kamid ahayd ardayda kaqalin jabisay sanadkaan dugsiyada sare ee magaalada Muqdisho. Qoyska gabadha ayaa hay’adaha amniga ka codsaday in dambiilayasha cadaaladda lahor keeno.
Soomaaliya waxaa sanadihii ugu dembeeyay aad ugusoo badanayay falalka kufsiga iyo dilka isugu jira oo loo geysanayay dumarka, laakiin arrintaan ayaa walaac badan ku abuureysa dadka ku nool caasimadda Soomaaliya.
Kufsiga gabdhaha ayaa waxaa loo aanaynayaa tabardarrida hay’adaha dowliga ah oo aan awoodin in ay sharciga marsiiyaan ciddii kufsi samaysa. In badan waxaa dhacda in dadka falalkaan gaysta aan ciqaabta ay istaahilaan lamarsiin ama siyaabo kale loo wajjaho.
Gudoomiyihii Rugta Ganacsiga Jubaland oo qarax kadhacay Kismaanyo ku geeriyooday
Qoorqoor oo lakulmay safiirka Maraykanka